PressReader - Ilanga: 2017-11-13 - IZODAYISWA EMALOKISHINI ABAMPISHOLO I-RUGBY SEVEN
IZODAYISWA EMALOKISHINI ABAMPISHOLO I-RUGBY SEVEN
Ilanga - 2017-11-13 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
SEWUZODAYISWA nasemalokishini abampisholo umdlalo webhola lombhoxo odume kakhulu ngeleRugby Sevens osanda kuxhaswa ngabeSouth African Breweries (SAB) ngomkhiqizo wabo iCastle Free Beer owethulwe muva nje eNingizimu Afrika.
I-SAB ngokubambisana ne-AB In Bev Afrika baxhase iHSBC Rugby Sevens ngenhloso yokugqugquzela lesi siphuzo esinganayo inhlese yotshwala.
UVaughan Croeser oyinhloko kwezokuxhasa kwaSAB, utshele ILANGA ukuthi lesi sivumelwano abasisayine neHSBC ngeseminyaka emibili. Uthi lena ngenye yezindlela yokunika amakhasimende abo okuhlukile. Uthi baqoke iRugby Sevens ngoba behehwe wumbono wayo wokuhambela emalokishini abampisholo ukuyodayisa lo mdlalo.
“Kuyisiqalo esihle kakhulu. Into edale ukuthi sibheke kakhulu iRugby Sevens yingoba ingena khaxa kubantu abasha abangakukhonzile ukushaya iziphuzo ezidakayo. Sihlele ukuthi uma kudlalwa lesi siphuzo sitholakale ngoba akubona bonke abantu abakhonze ukuphuza utshwala obudakayo,” kusho uCroeser.
Lo mdlalo kawudumile kakhulu kubantu abampisholo ngakho-ke ukuzungeza ezindaweni zasemalokishini kuzovukuza abalandeli kufake nentshisekelo yawo entsheni. Lesi siphuzo sizoqala ukutholakala ezindaweni zakuleli ngoZibandlela (December) nonyaka.
Imidlalo yeRugby Sevens Series izoqala eDubai ngomhla ziyisi-9 kuZibandlela bese ngesonto elilandelayo igijinyelwa eCape Town.